Isiokwu Research ga-aza ajụjụ ndị a | Martech Zone
Isiokwu Nchọpụta Ga-aza Ajụjụ Ndị A
Monday, August 13, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Anyị ahụla ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ihe ha kpọrọ nnyocha nyocha ọ na-eju m anya na oke ozi ha na-efu mgbe ha na-adụ ụlọ ọrụ ọdụ ndụmọdụ banyere isi okwu ha ga-eji zụọ ahịa azụmaahịa ha. Lee ụfọdụ ajụjụ dị mkpa anyị na-aza
Gịnị Keywords ụgbọala tọghatara? Ọ bụrụ na ị maghị, aga m akwado leveraging nchịkọta nke oma ma na akuko ka inwee ike mata isi okwu okwu na adighi azumahia… obughi ahia. A isi ndudue anyị na-ahụ site na ọtụtụ ụlọ ọrụ bụ na-elekwasị anya na Keywords na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ karịa Keywords na ụgbọala azụmahịa. Inweta n'ụzọ ziri ezi n'usoro na-ewe oge - gbaa mbọ hụ na ị na-eji ihe ndị ahụ eme ihe n'ụzọ amamihe dị na ya site n'ịkwado ndị ọbịa na-azụta ihe. Ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-ahụkarị mkpụrụ okwu nwere nnukwu ọchụchọ. Ọ gwụla ma ị na-ere mgbasa ozi na saịtị gị, ịchọrọ karịa nleta - ịchọrọ azụmahịa
Kedu Keywords ị na-ahazi maka ugbu a? N'ihi na ụlọ ọrụ na-eji oge dị ukwuu n'ịtụle okporo ụzọ, ha na-elegharakarị isiokwu ndị ha na-adịghị eme nke ọma anya kama nwere ike ịbụ. Chọpụta Keywords na peeji nke ị na-eli na rankings maka bụ a praịm ohere ka tweak peeji ndị ahụ ma nweta ọkwa ka mma. Anyị na-eji Semrush ịchọta peeji nke na Keywords na anyị na ọnọdụ. Mgbe ahụ, anyị na-ebuli ibe ndị ahụ mma ma na-enwekarị ọmarịcha ọnọdụ na ọkwa na okporo ụzọ.
Kedu isiokwu etiti enwere ike ịkọwa isiokwu gị? Peeji dị na saịtị gị nwere ike ịkwado ọtụtụ njikọta isiokwu. Ọ dị mkpa ịghọta ya isi isiokwu gị Keywords nwere ike kwekọọ na egwuregwu gị na ebe nrụọrụ weebụ nzukọ na itinye n'ọnọdụ. Ndi nhazi saịtị gi dakọtara na usoro isiokwu gi? Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere ike ịnwe ohere iji wuo peeji na ngalaba nke saịtị ahụ nke na-elekwasị anya na nyocha okporo ụzọ. Anyị na-ekwukarị peeji ole na ole maka ọdịda nke na-elekwasị anya na isiokwu karịa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ibe ndị ahụ na-ebuli ọkwa, okporo ụzọ, na ntụgharị. WordStream nwere isiokwu isiokwu ebe ị nwere ike mado 10,000 Keywords n'ime ya ọ ga-atụle ha maka gị.
Kedu isiokwu ndị ị kwesịrị ịsọ mpi? Ọtụtụ mgbe, gị mpi na-na-okporo ụzọ na ị nwere ike ịbụ… ma ọ bụrụ na ị na-aghọta ihe ha na-ogo maka na ị bụghị. Ma, ọtụtụ Keywords nwere ike ịbụ agaghị ekwe omume nweta ezi ogo on. Kedu ihe kpatara ị ji asọ mpi na isiokwu ndị ị na-agaghị emeri? Ọzọ, Semrush abụwo nhọrọ anyị maka nke a. Anyị nwere ike ile ngalaba asọmpi wee nyochaa isiokwu ndị asọmpi anyị na-akwado iji hụ ma anyị nwere oghere na atụmatụ ọdịnaya anyị.
Kedu isiokwu ndị ị nwere ike ịmepụta na nke ahụ ga - eweta ọkwa na okporo ụzọ? Ọ dị mma ịmepụta ndepụta nke ọtụtụ mkpụrụokwu na ahịrịokwu ahịrịokwu… mana kedu ahịrịokwu ị nwere ike ide na ederede blọọgụ, peeji nke ọdịda, akwụkwọ ozi, akwụkwọ ọcha, akwụkwọ ọgụgụ, ihe ngosi na vidiyo na taa nke ahụ ga-arụpụta ihe ozugbo? Anyị ekwenyeghi na nyocha isiokwu dị ezigbo mkpa ọ gwụla ma ị na-enye ndụmọdụ ọdịnaya yana nyocha ahụ. Chọta ogologo-ọdụ (obere olu, mkpa dị ukwuu) Keywords dị mfe iji WordStream.
N'agbanyeghị, ma ọ bụrụ na ị na-na na hụrụ ọhụrụ mma ọrụ interface si Semrush, ọ dị ịtụnanya:
Anyị na-agbasaghị iji Semrush maka nyocha zuru oke na WordStream maka nchoputa ogologo na nhazi usoro. Ngosipụta: The Semrush njikọ na post a bụ njikọ njikọ anyị.
Tags: isiokwunnyocha nyochaKeywordskeytail isiokwusemrushederede
Nzaghachi mmekọrịta na ROI site na Mmepụta
Nzọụkwụ 12 nke SEO Iweghachite